देशभरको मौसम कहाँ कस्तो रहला ? -3ghumti
देशभरको मौसम कहाँ कस्तो रहला ?
आषाढ २२, २०७८ मंगलवार ०८:३० बजे
काठमाडौँ – देशभरको मौसम मंगलबार आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
अहिले देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ । प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।